Madaxweynaha Soomaaliya Oo Dalka Dib Ugu Soo Laabtay “Sawirro” – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Madaxweynaha Soomaaliya Oo Dalka Dib Ugu Soo Laabtay “Sawirro”
Madaxweynaha ayaa intii uu shirku socday waxa uu la wadaagay madaxda Carabta, guulaha la taaban karo ee Soomaaliya ay ku tallaabsatay muddadii la soo dhaafay iyo qorshayaasha ay muhiimka tahay in walaalaha Carbeed ay kala shaqeeyaan Soomaaliya, si ay qeyb uga noqdaan dib-u-kabashada dalka.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xasuusiyey hoggaamiyeyaasha Carbeed muhiimadda ay leedahay midnimadu iyo wadajirku, maadaama marxalad adag ay ku jirto mandiqaddu, sida kaliya ee looga gudbi karana ay tahay isku duubni iyo in la ixtaraamo dal kasta madax-bannaanidiisa iyo karaamadiisa.
Madaxweynaha ayaa ka dalbaday Jaamacadda Carabta inay fuliso ballanqaadyadii iyo go’aamadii ka soo baxay shirarkii hore ee lagu taageerayay Soomaaliya iyo in badeecadaha Soomaaliya loo fududeeyo suuqyada Carbeed, cafinta daymahii hore ee waddamada xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta ay ku leeyihiin dalka iyo in lagu dhiirrigeliyo ganacsatada Carabeed in ay maalgashadaan Soomaaliya.
Dhanka kale, hoggaamiyeyaasha kale ee ka hadlay shir-madaxeedkan ayaa iyaguna khudbadahooda ku xusay arrimaha somaaliya, sheegayna inay mar walba garab-taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed.
Halka Hoose ka Daawo Sawirrada Shirkii 29-aad Hogaamiyaasha Dalalka Jaamacadda Carabta